Oral-B Genius X 20000N Black Edition ကိုတီထွင်ခဲ့သည် Gadget သတင်း
ထိုနည်းတူစွာ၊ Actualidad Gadget မှကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သောဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ပိုင်ရှင်ကကောင်းစွာရှင်းပြသည်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်သွားတိုက်တံအသစ်ကိုစမ်းသပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ Oral-B Genius X 20000N Black Edition နှင့် Oral-B ကိုယ်တိုင်က၎င်းကိုစာရင်းပြုစုသည် အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူသွားတိုက်.
El Oral-B Genius X သည်ယနေ့ခေတ်တွင် ၀ ယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏သွားများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပို iOS သို့မဟုတ် Android စက်များနှင့်ဆက်သွယ်သည်။ သင်၏သွားဆရာ ၀ န်အားဤကဲ့သို့စုတ်တံများကိုမေးမြန်းသည့်အခါများသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ဂျင်ဂိုက်ဗိုက်ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောမဟာမိတ်များဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကပြောလိမ့်မည်။ ငါတို့သွားတိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏သွားဖုံးမှသွေးထွက်သည်။
သင်၏ Oral-B Genius X စမတ်သွားတိုက်တံကိုသင်ရနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်သွားတိုက်တံကိုမရင်ဆိုင်ရပါ။ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သွားဆရာဝန်နှင့်နှစ်စဉ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လည်လည်ပတ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သွားအတွက်လျှပ်စစ်ဖြူသုံးခြင်းဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ပတ်သက်၍ သူ့ကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုပါသည်။ ကိစ္စရပ်အများစုတွင်သွားဆရာဝန်ကသွားကြားရှင်းကြိုးနှင့်သက်ဆိုင်သောစစ်ဆေးမှုများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကိုအခုဖယ်ထားလို့မရတော့ဘူး။ မင်းတို့တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့သွားဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်တယ်လို့ငါတို့ယုံကြည်တယ်၊ ငါ့ကိစ္စမှာငါလျှပ်စစ်သွားတိုက်တံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးပြီး ဒီခံတွင်း -B Genius X ဟာကျွန်တော့်သွားတိုက်တံတစ်ချောင်းပဲ.
3 ခံတွင်း -B ကပါရမီ X ကို box ကို contents တွေကို
5 နံ့သာနှင့်သန့်ရှင်းရေး mode ကိုပြောင်းလဲခြင်း
6 ၂ ပတ်ကြာအသုံးခံရန်ဘက်ထရီ
ပထမတစ်ချက်မှာကျွန်တော်မြင်နိူင်တာကဒီဟာသည်သမားရိုးကျစုတ်တံများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးထားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်စင်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သည့်အချက်အလက်များစွာကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်ဆေးကြောခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ရှင်းလင်းသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာပေးထားသောပရိုဂရမ်များနှင့်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာများအားလုံး။
Oral-B Genius X ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းပြောခြင်း၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအခါပုံမှန် Oral-B brush ထက်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်၎င်းကိုစမတ်ဖုန်း (ဤကိစ္စတွင် iPhone) နှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်သည် ရမှတ်များအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။
ဤကိစ္စတွင် Braun Oral-B ကုမ္ပဏီ၏ကျန်တံကျင်းများကဲ့သို့၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်တကယ့်ကိုတင့်တယ်လှပပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားများစုစုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဆုပ်ကိုင်။ Oral-B brush သို့မဟုတ်အချို့သောတုပသည့်တုန့်ပြန်မှုများ (များစွာသောအားဖြင့်အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ) သည်ဤဖြီးခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်၊ ၎င်းသည် Midnight Black ဟုခေါ်သောပန်းချီကားများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည့်အတိုင်းဝယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ထုတ်ကုန် box ကို။
ပလတ်စတစ်နှင့်ရာဘာများသည်ဤစမတ်ကိုပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအဓိကပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကြာရှည်ခံသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ထပ်ဖြည့်သည် ထိပ်ပေါ်မှာတစ် ဦး LED ကျွန်ုပ်တို့၏သွားများအပေါ်ဖိအားပေးမှုကိုမြင်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သွားများဖိအားကိုတိုက်ရိုက်ကူညီနိုင်ရန် ဦး ခေါင်းမတိုင်မီလေးတွင်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ brush brush မှာတွေ့ရတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ brush modes တွေကလည်း illuminated ပါ။ ဘက်ထရီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုကမ်းလှမ်း။
ခံတွင်း -B ကပါရမီ X ကို box ကို contents တွေကို
သင်ဖြီးဖြင့်ဘယ်နေရာကိုမဆိုသွားရန်နှင့်အားသွင်းခြင်း၊ အားသွင်းခြင်းမပြုလုပ်ရန်အိမ်တွင်လုံခြုံစွာအိမ်တွင်ထားခဲ့ပါ။ ဒီဖြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတာကငါတို့ခေါင်းကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့နဲ့သူနဲ့အခြားလူတွေကိုမျှဝေဖို့အတွက်လက်စွပ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကြိုက်နှစ်သက်ဖို့သင်လိုအပ်တာအားလုံးကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှုတ်ခမ်းကွဲသွားသည့်အခါ oral-B ကိုခံယူနိုင်ခြင်းသည်အလွန်သန့်ရှင်းပါသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသေတ္တာမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါကငါတို့ box ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ရာဖြစ်တယ် Oral-B Genius X 20000N အတွက်
ပထမ ဦး စွာ Oral-B Genius X လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ
တစ် ဦး ခံတွင်း -B ကို CrossAction ပြန်လည်ဖြည့်
သင့်ရဲ့စားပွဲ4refills အထိထားရန်ရပ်တည်
ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူခရီးစဉ်တစ်ခုတွင်သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများအရအမှန်တကယ်ပြည့်စုံသောဖြီး ၎င်း၏စမတ်ကျည်သည်ဘက်ထရီကိုထည့်သွင်းထားသည် ကြောင်းပြproblemနာမရှိဘဲဖြီးတင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကမ်းလှမ်း။
ယခုဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားသူများကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစမတ်ဖြီး၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုအပြည့်အဝလေ့လာတော့မည်။ အမှန်တရားမှာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ Genius X တွင်ဉာဏ်ရည်တုဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်၊ ၎င်းသည်ဆေးကြောခြင်းအလေ့အထများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး၎င်းသည်ရက်များနှင့်လများကုန်လွန်ခြင်းနှင့်အတူ ၎င်းသည်နို့တိုက်ခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မည်.
သွားများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့ဖိအားပေးမှုသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆိုးရွားနိုင်သည်။ Oral-B brush ၏ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းသည်ဝင်ရောက်မှုနှင့် ဦး ခေါင်း၏အမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် (brush brush ၏အထက်ပိုင်းတွင်) LED စက်ဝိုင်းတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့သွားများသို့မဟုတ်သွားဖုံးအပေါ်အလွန်အကျွံဖိအားပေးသည့်အခါကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးအနီရောင်တက်။ အားလုံး ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်းကိုအလိုအလျောက်လုံးဝလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ခြင်း။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရရှိနိုင်တဲ့အခြားသန့်ရှင်းရေးသတိပေးချက်များကိုပေါင်းထည့်လိုက်ရင်ပါးစပ်သန့်ရှင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုများစွာကူညီလိမ့်မယ်။
နံ့သာနှင့်သန့်ရှင်းရေး mode ကိုပြောင်းလဲခြင်း
၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Brush mode (၆) ခုအထိရှိသည်။ ပုံမှန်နေ့စဉ်သွားတိုက်ခြင်း၊ သွားဖုံးစောင့်ရှောက်မှု၊ အထိခိုက်မခံသော mode၊ Pro Clean Mode၊ ဒီ mode တွေဟာတစ်နေ့တာပေါ်မူတည်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ရွေးချယ်စရာများပိုမိုပေးနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့် Bluetooth ချိတ်ဆက်မှု။ ဤဆက်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သွားများကိုပုံဖော်ခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါးစပ်တစ်ပိုင်းစီကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေး၊ သန့်စင်ရန်နှင့်သန့်ရှင်းစေရန်တံခါးဖွင့်ပေးသည်။
ဖြီးပါ ၀ င်သည့် ring-shaped LED သည်သန့်ရှင်းရေးareaရိယာ၏ပြောင်းလဲမှုကိုညွှန်ပြရန်စက္ကန့် ၃၀ ခန့်တွင်အပြာရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ Artificial Intelligence ကသင်၏နူးညံ့စတိုင်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအခါတိုင်းအကောင်းဆုံးရလဒ်များရရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြပေးသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးရလဒ်ကောင်းများဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏သွားဆရာ ၀ န်များ၏ထင်မြင်ချက်များကို၎င်းစုတ်တံများအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အမြဲတမ်းသတိထားသင့်သည်။
Oral-B အသုံးချပရိုဂရမ်သည်“ geeks” ကိုအများဆုံးကူညီသည်ဟုပြောနိုင်ပြီး၎င်းသည်မလိုအပ်သည်မှန်သော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းရေးကိုခြေရာခံရန်အသုံးဝင်သည်။ iOS နှင့် Android အတွက် application များသည်အခမဲ့ဖြစ်သည် နှင့်ငါတို့အနည်းငယ်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သန့်ရှင်းရေးကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုပါ။
ရေးသားသူ: Procter & Gamble ထုတ်လုပ်မှုများ
ဤကြီးစွာသောခံတွင်း - ခ Genius X ကိုခံစားကြည့်ပါ
Lithium-ion ဘက်ထရီသည်သွားများကိုသွားတိုက်ပေးသည် အားသွင်းစရာမလိုဘဲနှစ်ပတ်ခန့်။ ထို့အပြင်ခရီးသွားလာရန်အတွက် Smart Case ရှိခြင်းသည်သွားဘက်ထရီအပိုပါသည့်သွားတိုက်တံကိုယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များနှင့်သွားများကိုသွားတိုက်ရာတွင်အသုံးပြုသောသူများအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည်။ ။
ထို့အပြင် Smart travel case သည်အားသွင်း port နှင့်၎င်း၏ USB type A port ကြောင့်ဖုန်းကိုအားသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီအမှုကိုယ်နှိုက်အားသွင်းရန်အသုံးပြုသည်မဟုတ်။
အက်ပလီကေးရှင်းကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်မြင်ကွင်းကို Bluetooth ထိန်းချုပ်နိုင်သည်
ဒါဟာစျေးပေါတဲ့ brush မဟုတ်ပေမယ့်အလွန်အမင်းအကြံပြုသည်
ခံတွင်း -B က Genius X ကို 20000N က Black Edition ကို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Oral-B Genius X 20000N Black Edition ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်